अनशनरत डा. केसीकी आमा रु:दै भन्छिन : “मैले मेरो छोरा देश र जनताका लागि समर्पण गरे !” – Life Nepali
अनशनरत डा. केसीकी आमा रु:दै भन्छिन : “मैले मेरो छोरा देश र जनताका लागि समर्पण गरे !”
कृष्णकुमारी चौलागाई । यता सरकारका प्रतिनिधि र डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षबीच वार्ता भइरहदा उता क्यान्सरसंग लड्दै आएकी केसीकी आमाको मुटुको ढुकढुकी पनि उत्तिकै बढ्छ । वार्ता सफल होस् र आफ्नो छोराको माग पूरा होस् भन्ने कामना गर्दै उनका समय समाचारमा टोलाउदै वित्ने गर्छन । बिहीबार पनि डा.गोविन्द केसीको निवास पुग्दा उनकी आमा मित्र कुमारी केसी पनि सरकार आफ्नो छोराको माग छिटै पुरा गरोस् भन्ने आशाका साथ बसेकी थिइन् । **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ****
मामाघरमा बाल्यकाल विताएका केसी आमालाई सानीआमा भन्थे
उमेरले ८५ वसन्त पार गरिसकेकी मित्र कुमारीको डा। गोविन्द केसी जेठा छोरा हुन् । रामेछाप जिल्लाको सिम्ले भन्ने स्थानका डा। केसी बाल्यकालदेखि नै मामा घर बसेर शिक्षा हासिल गरेका थिए, सानो उमेरमा नै मामा घर बसेर पढेका डा। केसी आफ्नी आमालाई सानीआमा भन्थे । तृक्ष्ण दिमागका केसी बालापनदेखि सामाजिक सेवामा विशेष भाव राख्दथे ।
१९ औँ पटक सम्म अनशन बस्दा एक पटकमात्र उनी अनशनरत छोरालाई भेट्न पुगेकी छन् । छोराले गरीब जनताका छोरा छोरीले पनि धनीका सन्तान जस्तै गरी सहज रुपमा शिक्षा पाउन पर्छ भन्ने र देश जनताको हितको लागि बसेको अनशनप्रति उनी छाती गर्विलो भएको बनाउछिन् । ‘सरकारसंग लिएको अडानमा म सहमत छु, सरकारको पो कान छैन त’ उनी भन्छिन् ।
‘मेरो छोरा मैले देश र जनताका लागि समर्पण गरे’
उनी भन्छिन् ‘मैले मेरो छोरा देश र जनताका लागि सर्मपण गरेको छु । मेरो छोराले केही फट्याई गरेको छैन देश र जनताको लागि अनशन बस्दा मैले नबस अथावा अरु केही भन्नुको आवश्यक छैन, सबैको भलोका लागि काम गर्छ भने त्यसमा मैले खुशी मानेको छु । सुरु सुरुको अनशनमा के हो केहो भन्ने लागे पनि अहिले मैले मेरो छोराले सबैको भलोको लागि बसेको बुझिसकेको छु । ’
लामो समय सरकारी सेवामा रहेका डा। केसी आमा तथा परिवारलाई पनि अत्ति नै प्रेम गर्ने गरेको उनी बताउछिन् । बेला बखतउपहार स्वरुप के के कपडा बोकेर आउथ्यो र भन्थ्यो ‘मलाई ठग्छन् आमा ।’ जागिर सकिएपछि आमासंगै बसेका डा। केसी यो पटक पश्चिम जाँदा आमालाई हप्ता दिनमा नै फर्किएर आउछु भनेका थिए । हिडने बेला अब फेरि उता अनशन बस्ने होला भनेर आमाले सोध्दा बस्दिन छिटै आउछु भन्थ्यो, उतै अनशन बसेछ, आफु जान नसके पनि जाने आउनेलाई छोराको स्वास्थ्य अवस्था बारे सोध्ने गरेकी उनको भनाइ छ ।
वार्ता चाँडै सफल होस्
क्यान्सर रोगले थलिएर केही तङ्ग्रिएकी मित्रकुमारीलाई सरकारसंगको वार्ताले चाँडै सकारात्मक परिणाम ल्याओस् र छोराले अनशन तोडोस् भन्ने लाग्छ । बुढ्यौली र रोगले केही विर्सने बानी भएकी मित्रकुमारी छोरालाई आफुले कहिलेपनि के गर्नु के नगर्नु भन्ने कुरामा निर्देश नगरेको बताउछिन् । उनलाई छोरा आफुले भनेको जस्तो हुनुभन्दा पनि देशको शिक्षा पद्धति छोराले चाहेको परिवर्तन देशमा आइदिए छोराले पटक पटक अनशन बस्नु पर्दैनथ्यो भने जस्तो लाग्छ । – तस्बीर : महेश्वर के.सी / न्यूज २४ नेपाल
Previous दशैको समयमा लकडाउन हुन्छ कि हुदैन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सूचना ! पढ्नै पर्ने –
Next Breaking news : लाखौं पुगेको सुनको मुल्य, आज सोच्नै नसकिने गरि घट्यो !